အမျိုးမျိုးသော - categories - [နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ]
WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ် Instagram ကိုဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို
2018-11-28 2019-05-28 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ် Instagram ကိုဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို : WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ် Instagram ကိုဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို
WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းအပေါ် Instagram ကိုဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို စက္ကန့် 30 ဗီဒီယိုများကန့်သတ်ခံနေရသည့် WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းတစ်ခုကို Instagram ကိုပေါ်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အခြားဗီဒီယိုဖော်ရွေပလက်ဖောင်း upload နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အပေါ် WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းပေါ်ဝေမျှဖို့ သာ. ကောင်း၏။...
WhatsApp ကို ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
2019-04-20 2019-05-08 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
WhatsApp ကို ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : WhatsApp ကို ကိုအပေါ်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း
WhatsApp ကို ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို သငျသညျတစ်စုံတစ်ယောက်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြသောအခါ, WhatsApp ကို ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း, သင့်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လျှောက်လွှာ uninstall ပြုလုပ် reinstall အသစ်တစ်ခုအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။...
ဖျက်ပစ် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်ရယူလုပ်နည်း
2018-11-10 2019-05-08 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
ဖျက်ပစ် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်ရယူလုပ်နည်း : ဖျက်ပစ် Whatsapp မက်ဆေ့ခ်ျ retrieve
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ချက်တင် restore WhatsApp တစ်ဦး Chat history ကို restore ဖို့လမ်းတစ် WhatsApp ကို backup လုပ်ထား restore ပြန်သဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ဦးဖုန်းမှ WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျလွှဲပြောင်းအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။...
2019-04-20 2019-04-20 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
xVideoServiceThief သုံးပြီးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? : xVideoServiceThief အဓိကပြတင်းပေါက်
xVideoServiceThief သုံးပြီးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း သင်သည်မည်သည့်အချက်မှာသငျသညျကို download လုပ်ပါနှင့်သင့်စာကြည့်တိုက်မှကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်တစ်ခုအွန်လိုင်းဗီဒီယိုရှာဖွေတွေ့ရှိရှိပါသလား? ဒီတစ်ခါလည်းသူကသင့်ရဲ့အများဆုံးခစျြတဲ့စာရွက်တစ်ဗီဒီယို, သင်အကြိုက်ဆုံးရယ်စရာကြောင်ဗီဒီယိုများတစ် Montage, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုဘယ်လိုမှသင်တန်းသင်နှင့်အတူအပြင်းအထန်ခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့နည်းပညာပြဿနာအဘို့ပါပဲ။...
2019-04-08 2019-04-08 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
အန်းဒရွိုက်ဖုန်းတွင်အဆက်အသွယ်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်ကဘယ်လို : Android စမတ်ဖုန်းအပေါ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစာရင်း
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစေလွှတ်ပေမယ့်ရရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ် အန်းဒရွိုက်ဖုန်းတွင် SMS ကိုကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများထွက်ပေးပို့နိုင်ပေမယ့်တိကျတဲ့အဆက်အသွယ်, သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်းထဲကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်သောအခါ, ပြဿနာအဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ပြဿနာ troubleshoot ရန်။...
MMS ကိုရုပ်ပုံမက်ဆေ့ခ်ျကို Android ဖုန်းပေါ်မှာလှေတျတျောမူလိမျ့မညျမဟု
MMS ကိုရုပ်ပုံမက်ဆေ့ခ်ျကို Android ဖုန်းပေါ်မှာလှေတျတျောမူလိမျ့မညျမဟု : MMS ကိုရုပ်ပုံသတင်းစကားနှင့်အတူစာသားမဆွေးနွေးမှု
မပို့ခဲ့ရုပ်ပုံမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကိုဘယ်လို To be able to send or receive an MMS picture စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, an active working mobile data connection is necessary, as the MMS picture messages are sent over the standard phone network, and cannot be sent withaWiFi connection for example....
Android စမတ်ဖုန်းအပေါ်ခေါ်ဆိုသူ ID ပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Android စမတ်ဖုန်းအပေါ်ခေါ်ဆိုသူ ID ပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစာရင်း Menu ထဲမှာပိတ်ဆို့ Call နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ
အဘယ်ကြောင့်သင်၏နံပါတ်ခေါ်ဆိုသူ ID ပိတ်ဆို့ ဒါဟာဥပမာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, ဒါမှမဟုတ်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေးခြင်းနှင့်အတူ spam ဖြန်စောင့်ရှောက်မယ့်အရေအတွက်ကရှောင်ရှားရန်, ထိုတိကျသောအရေအတွက်ကိုကနေမဆိုဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးခေါ်ဆိုမှု ID ပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။...
Android ပေါ်မှာနံပါတ်ကနေခေါ်ဆိုမှုကိုစာသား SMS ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Android ပေါ်မှာနံပါတ်ကနေခေါ်ဆိုမှုကိုစာသား SMS ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : မက်ဆေ့ခ်ျများစာရင်းပိတ်ဆို့
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထဲကနေ block ကျမ်းကို SMS ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအများကြီး spammy SMS ကိုမှပို့ပေး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုသင်တော့ဘူးသင်ဆက်သွယ်ချင်ကြပါဘူးအခါ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရောက်ရှိဤစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုရပ်တန့်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင် Android ပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျစာတိုပို့ခြင်းကနေပေးပို့သူပိတ်ဆို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။...
အန်းဒရွိုက်ဘာလုပ်ရမှန်း, ဝိုင်ဖိုင်မချိတ်ဆက်နိုင်သလဲ : Wi-Fi network ကိုချိတ်ဆက် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကိုအလုပ်လုပ်နှင့်ဖုန်း
အန်းဒရွိုက် Wi-Fi မချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါ Wi-Fi ကို Android ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ရှိပြီးသား Wi-Fi network ကိုချိတ်ဆက်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ် connection ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကျဆင်းနေသောအခါကိစ္စကို troubleshoot နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အလုပ်လုပ် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားဖို့ကဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ။...
အန်းဒရွိုက်တဦးတည်းအရေအတွက်ကစာသားမပို့နိုင်ပါတယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ
အန်းဒရွိုက်တဦးတည်းအရေအတွက်ကစာသားမပို့နိုင်ပါ ဖုန်းကိုတဦးတည်းသီးခြားအရေအတွက်ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်မရဖြစ်တဲ့အခါ, အကြောင်းပြချက်အရေအတွက်ကိုပေးပို့သူဘက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လက်ခံဘက်မှာဖြစ်စေပိတ်ဆို့ထားပြီးအကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတော့ဘူးမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဥပမာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြွေး ကန့်သတ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။...
Android ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်မိုဘိုင်းဒေတာကို fix လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Android ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်မိုဘိုင်းဒေတာကို fix လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : ဆယ်လူလာဒေတာ option ကို activated
မိုဘိုင်းဒေတာက Android အလုပ်မလုပ် တစ်ခုက Android ဖုန်းပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမမိုဘိုင်းဒေတာရှိခြင်းသည့်အခါက 3G ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုရယူမနိုင်, သို့မဟုတ်ပါကမိုဘိုင်းကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုကိုချိတ်ဆက်မည်မဟုတ်လျှင်, ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။...
ဘယ်လို Android ဖုန်းကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်မခံမယူနိုင်သလဲ
ဘယ်လို Android ဖုန်းကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်မခံမယူနိုင်သလဲ : အထွက်နှင့်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများစာရင်းနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဆိုမှု log
Android ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်မခံမယူနိုင်ပါတယ် တစ်ခုက Android ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမခံမယူနိုငျသညျ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖုန်းကိုအူမပါဘဲ အသံစာပို့ မှဖြောင့်သွားကြသည်သောအခါ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ SIM ကဒ်အားဖြင့်လက်ခံရရှိကြသည်မဟုတ်။...
ဘယ်လိုစက်ရုံတစ်သော့ခတ် Android ဖုန်းကို reset နည်း
ဘယ်လိုစက်ရုံတစ်သော့ခတ် Android ဖုန်းကို reset နည်း : တစ်သော့ခတ်က Android ဖုန်းပေါ်မှာ data ကို factory reset option ကို Wipe
အဘယ်သို့ငါစက်ရုံတစ်သော့ခတ် Android ဖုန်းကို reset ပါဘူး သင်သည်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းထဲကသော့ခတ်နေကြသည်နှင့်ဘာမှမပွုနိုငျ, သင်စကားဝှက်တစ်ခုသို့မဟုတ် PIN ကိုဖြစ်စေနှင့်အတူဖန်သားပြင်ကိုသော့ဖွင်မနိုင်သည့်အခါဖုန်းကို recover လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာစက်ရုံအပြင်ဘက်ကနေ reset ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။...
OK ကို Google က voice commands ကို activate လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
OK ကို Google က voice commands ကို activate လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? : OK ကို Google ကရှာဖှေအိုကေ Google က app ကိုအပေါ်ပြုမိ
အိုကေ, Google voice commands ကိုကိုသက်ဝင် အဆိုပါ OK ကို Google အသံပညတ်တော်တို့ကိုတစ်ဦးကို Android ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါရိုးရှင်းစွာစကားသံကို command ကို program မှနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်, သင့်ဖုန်းကိုအဘို့အ OK ကို Google ကသက်ဝင်စေပါ။...
Android ပေါ်မှာ default ဖိုင် messaging app ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
Android ပေါ်မှာ default ဖိုင် messaging app ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို : default ကို messaging app ရွေးချယ်ရေး
Android ပေါ်မှာပြောင်းလဲမှုက default ကို messaging app က Android app ကိုစတိုးကနေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား SMS ကိုကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ app ကို download လုပ်ပါရှိခြင်းပြီးနောက်ကပဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီးကြောင်းလျှောက်လွှာရန်, ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများကပေးသောတဦးတည်းအနေဖြင့်က default ကို messaging app ကိုပြောင်းလဲရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မယ်။...
Android ပေါ်မှာ APN ကိုမိုဘိုင်းကွန်ရက် settings ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
Android ပေါ်မှာ APN ကိုမိုဘိုင်းကွန်ရက် settings ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ? : အန်းဒရွိုက်တခုတခုအပေါ်မှာ APN ၏ဖန်ဆင်းခြင်း
မိုဘိုင်းကွန်ရက် setting များကို APN ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုဒေတာတစ်ခုက Android ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, အကြောင်းပြချက်တစ်ခု APN တစ်ခုကအင်တာနက် access point အမည်, setup ကိုမတော်မူကြောင်းကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။...
Android ပေါ်မှာအသံစာကိုအကြောင်းကြားစာအိုင်ကွန်ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ? : အန်းဒရွိုက်အကြောင်းကြားစာဧရိယာပေါ်မှီဝဲ voicemail သတိပေးချက်အိုင်ကွန်
Android ပေါ်မှာအသံစာကိုအကြောင်းကြားစာကို turn off တစ်အသံစာကိုရောက်ရှိသည့်အခါကအကြောင်းကြားစာဟာအသံစာကိုနားထောငျခဲ့ကြောင့်ဖျက်ပစ်ဘဲလျက်ပင်ပြီးနောက်, ဖုန်းပေါ်မှာမှီဝဲကြောင်းဖြစ်ပျက်။...
Lebara အင်တာနက်ကို activation code ကို
2019-02-20 2019-02-20 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
Lebara အင်တာနက်ကို activation code ကို : Lebara ကအင်တာနက်ကိုသက်ဝင်
Lebara နေ SIM ကဒ်ဝယ်ယူတော်မူပြီးမှ, နှင့်တစ်ဦးမဖြစ်မနေခြေလှမ်းအချို့အကြွေးအွန်လိုင်းအတူကတက်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သော၎င်းတို့၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပွီးနော။...
Virgin Mobile အင်တာနက်ကို activation code ကို : Virgin Mobile အင်တာနက်ကိုသက်ဝင်စေ
Virgin Mobile အင်တာနက်ကိုသက်ဝင်စေ Virgin Mobile ကနေ SIM ကဒ်ဝယ်ယူတော်မူပြီးမှ, နှင့်တစ်ဦးမဖြစ်မနေခြေလှမ်းအချို့အကြွေးအွန်လိုင်းအတူကတက်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သော၎င်းတို့၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပွီးနော။...
Android ဖုန်းအပူ - android ဖုန်းဘက်ထရီဖျန်အစာရှောင်ခြင်းပြင်ဆင်ချက်
2018-08-11 2019-02-12 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
Android ဖုန်းအပူ - android ဖုန်းဘက်ထရီဖျန်အစာရှောင်ခြင်းပြင်ဆင်ချက် : ဖုန်းကိုဖွင့်အပူနှင့်ဘက်ထရီဖျန်
သငျသညျတခါတရံအတွေ့အကြုံကိုဖုန်းကိုအပူလွန်ကဲနွေး, android ဖုန်းကိုရတဲ့, ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီအစာရှောင်ခြင်းဖျန်လြှငျ, လျင်မြန်စွာအများဆုံးဘက်ထရီစားသုံး app များကိုစစ်ဆေးနှင့်ဘက်ထရီဟာ android ဖျန်မှ apps များရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ!...
2018-08-01 2019-02-12 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
ဖုန်းအသစ်မှအန်းဒရွိုက်လွှဲပြောင်းဓာတ်ပုံများ : စနစ်တကျအချက်အလက်အားလုံးကိုနှင့်အတူဖုန်းအသစ်ပေါ်ကူးယူရုပ်ပုံ: နေ့စွဲ, တည်နေရာ, ...
android ဖုန်းမှဟာ android ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို အသစ်တစ်ခုကို Android ဖုန်းရတဲ့အခါ, တစ်ဦးဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖုန်းအဟောင်းထဲကဒေတာအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းရန်မခြုံငုံလွယ်ကူသောလမ်းလည်းမရှိ။...
2018-07-30 2019-02-12 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
တစ်ခက်မှပြန်လည်စတင်အတူကပြန်ဖွင့်အတင်းကိုဘယ်လိုအေးခဲဖုန်းနံပါတ် : Samsung ရဲ့ Galaxy S7 အေးစက်နေတဲ့: 20 စက္ကန့်အဘို့ပါဝါနဲ့ volume ကိုဆင်းသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အင်အားသုံး reboot
ဖုန်းရှိခြင်း (သို့မဟုတ်အများစုဖွယ်ရှိ, စမတ်ဖုန်း) တုံ့ပြန်ဘဲ, ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်သောဖြုတ်ဘက်ထရီပါဝါထဲကပြေးသည်အထိရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဆူညံသံအောင်?...
2018-06-23 2019-02-12 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
Lyca မိုဘိုင်း Activate အင်တာနက် setup ကို access point name ကို : အသစ်က Access Point Name Save ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Lycamobile ကအင်တာနက်ကိုသက်ဝင် , Lyca မိုဘိုင်းကနေအသစ်တခု SIM ကဒ်ရတဲ့ကဒ်ကိုသက်ဝင်၎င်းတို့၏ website တွင်မှတ်ပုံတင်လုပ်နေနှင့်အကြွေးဝယ်တက် topping ပြီးနောက် - ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြိုဆိုဆုကြေးဇူးကိုအကြွေးဝယ်ရတဲ့, တဦးတည်းကိစ္စပေါ်လာသော: 2G / 3G / 4G မိုဘိုင်းအင်တာနက်သူ့ဟာသူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, သာစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် option ကိုသက်ဝင်သည်။...
input ကိုဘာသာစကားက Android ကိုပြောင်းလဲ
2018-12-15 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
input ကိုဘာသာစကားက Android ကိုပြောင်းလဲ : ဘလူးတုသ်ကီးဘုတ် Android ပေါ်မှာဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
အန်းဒရွိုက်အတွက်ကီးဘုတ်ဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို မီနူး setting များကို> ဘာသာစကားနှင့် input ကို> ကီးဘုတ် options များအတွက်, ကီးဘုတ် input ကိုနဲ့ Bluetooth ကီးဘုတ် input ကိုအသုံးပြုဖို့ input ကိုဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။...
အန်းဒရွိုက် cache ကို partition ကိုသုတ်
2018-10-13 2018-12-21 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
အန်းဒရွိုက် cache ကို partition ကိုသုတ် : Clear ကို cache ကိုအန်းဒရွိုက်
အမြစ်မပါဘဲမလုံလောက်သိုလှောင်မှုရရှိနိုင်ပါက Android ပြင်ဆင်ချက် သင့်ရဲ့ Android နှေးကွေးနေရတဲ့လျှင် app ကိုမလုံလောက်သောသိုလှောင်မှုရရှိနိုင် install နှင့်မလုံလောက်သိုလှောင်မှုရရှိနိုင်ပါက Android ပြင်ဆင်ချက်မလိုအပ်နိုင်ပါတယ်, ဒီမှာလျင်မြန်စွာအချို့သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်တစ်ခုအမြန်ဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။...
MDNSD က Android Facebook ကိုမတုံ့ပြန်
2018-10-18 2018-10-19 နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံ အမျိုးမျိုးသော
MDNSD က Android Facebook ကိုမတုံ့ပြန် : မြင့်မားတဲ့ Android ကို MDNSD ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု
ကြောင့် MDNSD ဖြစ်စဉ်ကိုအန်းဒရွိုက်ဖို့, သင့်ဘက်ထရီကိုအစာရှောင်ခြင်းဖျန်ရယူခြင်း, သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ Facebook app ကိုအကြောင်းအရာမပြထားဘူးများနှင့်တုံ့ပြန်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော...
အဆိုပါ Notepad ++ ပျောက်ဆုံး plugin ကိုမန်နေဂျာကိုပြန်ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်စာမျက်နှာကဲ့သို့ Facebook က
ကျွန်ုပ်မည်သို့ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
ပုံစံချပေးနှင့်အတူ notepad ++ မိတ္တူ
မြှားသော့ excel ဆဲလ်တွေသွားလာမရ မြှားသော့နှင့်အတူဖန်သားပြင်ကျမ်းလိပ်များ excel မြှား Excel မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး မြှားသော့ Excel မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ကိုယ့် Excel ကကျမ်းလိပ်များအတွက်မြှားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ Excel အတွက်အလုပ်မ arrow ဆဲလ်မြှားသော့နှင့်အတူမရွှေ့ပါဘူး excel Excel အတွက်မြှားသော့နှင့်အတူရွှေ့ဖို့ဘယ်လို Excel ထဲမှာအလုပ်လုပ်မြှားသော့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ မြှား Excel ထဲမှာဆဲလ်တွေမပြောင်းကြဘူး မြှား key ကို Excel အတွက်လာမယ့်ဆဲလ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့မရ ဆဲလ် scrolling မဟုတ် excel သော့ချထားသောမြှားသော့ excel Excel အတွက်မြှားသော့အလုပ်မလုပ် မြှားအလုပ်မလုပ် Excel မြှားသော့အလုပ်လုပ်ရပ်တန့် excel မြှား key ကို Excel ထဲမှာရွေ့လျားမရ အလုပ်မလုပ် 2013 မြှားသော့ excel ကီးဘုတ် Excel လုပ်မလုပ်မြှား နှိမ့်ချတက် excel မြှားစာမျက်နှာရွှေ့ Excel ထဲမှာဆဲလ်တွေရွှေ့ဖို့မြှားကိုသုံးပါ ဆဲလ် pointer Excel ထဲမှာရွေ့လျားမရ မြှားသော့ Excel တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုအပြုအမူ scrolling Excel Excel ထဲမှာ Cursor ကိုရွေ့လျားခြင်းမရှိပါ